မြန်မာနိုင်ငံဟာ သူရဲ့ဒုတိယအိမ်ပါလို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်LGBTမော်ဒယ် Sinon Loresca - Cele Platform
King of Catwalk (လှောက်လှမ်းတွေရဲ့ဘုရင်)လို့ လူအများတင်စားကြတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မော်ဒယ် SinonLoresca ဟာမြန်မာနိုင်ငံကို သူ့ရဲဒုတိယအိမ်ပါလို့တင်စားလိုက်ပါတယ်။
မကြာသေးမှီကမှသူရဲ့ catwalkလျှောက်တာတွေပြီးလို့ မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်သွားတဲ့သူဟာ မပြန်ခင်မြန်မာနိုင်ငံကို လွမ်းနေဆတာ့မှာပဲဆိုပဲ မျက်ရည်ကျခဲ့သေးတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေစဉ်ကလဲ အလှူအတန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ခင်မင်တတ်တဲ့သူ့ကို အကုန်လုံးက ချစ်ခင်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
သူဟာမနက်ဖြန် စက်တင်ဘာလ၁၄ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာမယ့် သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာ မြန်မာဆိုတာ ငါ့ရဲ့ဒုတိယအိမ်ကလေးကို ပြန်လာပါပြီ ချစ်တယ်ဆိုပြီး သူရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ထားတာပါ။
အဲ့တာအပြင်သူဟာ မနက်ဖြန်မနက်၁၁နာရီမှာ လေဆိပ်ကိုရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လာကြိုကြမှာလားဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့ပရနသတ်တွေကို မှတ်ချက်ရေးသားပြီး မေးမြန်းထားပါသေးတယ် ပရိသတ်ကြီးတို့ကော သူ့ကိုချစ်ကြလာ? မှတ်ချက်ကလေးတွေရေးသားပေးခဲ့ပါအုံးနော်။SOURCE-SinonLoresca facebook page
King of Catwalk (လှောကျလှမျးတှရေဲ့ဘုရငျ)လို့ လူအမြားတငျစားကွတဲ့ ဖိလဈပိုငျမျောဒယျ SinonLoresca ဟာမွနျမာနိုငျငံကို သူ့ရဲဒုတိယအိမျပါလို့တငျစားလိုကျပါတယျ။
မကွာသေးမှီကမှသူရဲ့ catwalkလြှောကျတာတှပွေီးလို့ မွနျမာနိုငျငံကနပွေနျသှားတဲ့သူဟာ မပွနျခငျမွနျမာနိုငျငံကို လှမျးနဆေတာ့မှာပဲဆိုပဲ မကျြရညျကခြဲ့သေးတာပါ။ မွနျမာနိုငျငံမှာရှိနစေဉျကလဲ အလှူအတနျးတှပွေုလုပျခဲ့ပွီး ခငျမငျတတျတဲ့သူ့ကို အကုနျလုံးက ခဈြခငျအားပေးခဲ့ကွပါတယျ။
သူဟာမနကျဖွနျ စကျတငျဘာလ၁၄ရကျနမှေ့ာ မွနျမာနိုငျငံကိုပွနျလာမယျ့ သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကနတေဈဆငျ့ ပရိသတျတှကေို အသိပေးခဲ့ပါတယျ။သူဟာ မွနျမာဆိုတာ ငါ့ရဲ့ဒုတိယအိမျကလေးကို ပွနျလာပါပွီ ခဈြတယျဆိုပွီး သူရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျထားတာပါ။
အဲ့တာအပွငျသူဟာ မနကျဖွနျမနကျ၁၁နာရီမှာ လဆေိပျကိုရောကျမှာဖွဈတဲ့အတှကျ လာကွိုကွမှာလားဆိုပွီး မွနျမာနိုငျငံကသူ့ရဲ့ပရနသတျတှကေို မှတျခကျြရေးသားပွီး မေးမွနျးထားပါသေးတယျ ပရိသတျကွီးတို့ကော သူ့ကိုခဈြကွလာ? မှတျခကျြကလေးတှရေေးသားပေးခဲ့ပါအုံးနျော။SOURCE-SinonLoresca facebook page